Iqoqo - I-Flash Offers - THE INDIAN FACE
Ukuqoqwa - Amadili eFlash
Oxygen I-Edition Grey / Bomvu
Precio de deerta1895 € 18.95 € Isiqalo se-Precio 5495 € 54.95 € Wonga u-€36
IVentura Okumnyama / Oluhlaza okwesibhakabhaka
Precio de deerta1895 € 18.95 € Isiqalo se-Precio 4995 € 49.95 € Wonga u-€31
ISouthcal Soft Tortoise
Kailani I-White Tortoise
Precio de deerta1895 € 18.95 € Isiqalo se-Precio 6495 € 64.95 € Wonga u-€46
Born to Fly Okumnyama / Grey
ISouthcal Green Tortoise
Ufudu Royal Blue
Precio de deerta2495 € 24.95 € Isiqalo se-Precio 4000 € 40.00 € Wonga u-€15.05
I-Barefoot Pink / Blue
Oxygen Shintsha i-Blue Tortoise / Luhlaza
Tarifa Mpunga / Luhlaza okwesibhakabhaka
Born to Run Mpunga / Luhlaza okwesibhakabhaka
Nunkui Ibhodlela eliluhlaza
Born to Paddle Okumnyama / Grey
Expedition Okuluhlaza / Oluhlaza okwesibhakabhaka
Precio de deerta1895 € 18.95 € Isiqalo se-Precio 4495 € 44.95 € Wonga u-€26
Born to Sail Okuluhlaza / Okuphuzi / Okumhlophe
UNoosa Tortoise onomugqa omhlophe
Born to Paddle Mhlophe / Luhlaza
IFlamingo Mpunga / Mnyama
IVenice Mpunga / Mhlophe / Luhlaza okwesibhakabhaka
I-Barefoot White / Purple
I-Southcal Dark Tortoise
Oxygen I-Edition Grey / Mnyama
Born to Roll Okuluhlaza / Okumhlophe
Ufudu Oluluhlaza OlunguNoosa
Polar Ngombala omnyama / onsundu
Umnyama Omnyama / Mnyama
Precio de deerta8495 € 84.95 € Isiqalo se-Precio 16500 € 165.00 € Wonga u-€80.05
I-Fox Turquoise Blue
Tarifa Mnyama / Luhlaza okwesibhakabhaka
Freeride Spirit Omnyama / Olubomvu
Born to Fly Luhlaza / Mnyama
Born to Roll Mhlophe / Olubomvu
Zebra Mhlophe / Uphephuli
Polar Okumnyama / Okuhlaza
Born to Street Ball Mhlophe / Olubomvu
Born to Ultratrail Mhlophe / Mnyama
Free Spirit I-Blue Tortoise / Luhlaza okotshani
Polar Omnyama / Olubomvu
Born to be Free Okuluhlaza / Okumhlophe
IPanda Mhlophe / Uphephuli
Tarifa Okumpunga / iBurgundy
Oxygen I-Edition Blue Tortoise / Blue
UVentura Brown / Oluhlaza okwesibhakabhaka
Oxygen I-Edition Grey / Green
Born to Snowboard Mhlophe / Mnyama / Mnyama
Itshe Elimnyama / Elimhlophe
Precio de deerta4495 € 44.95 € Isiqalo se-Precio 12000 € 120.00 € Wonga u-€75.05
I-Barefoot Royal Blue
I-Ventura Imnyama / Luhlaza
Free Spirit Okuluhlaza / Oluhlaza okwesibhakabhaka
Tarifa I-Tortoise / Blue
Tarifa Okumnyama / Okuhlaza
Born to Skate Olubomvu futhi omnyama
Free Spirit Izinkuni / Mnyama
1 2 3 Okulandelayo
I-OUTLET KANYE NEFLESHI OKUNIKEZELWA ESITOLONI SETHU SE-INTANETHI SAMADODA NABESIFAZANE
Inani lemali ku- The Indian Face
The Indian Face wumkhiqizo ozwa ukukhala kwemvelo futhi ulandela umsindo we-adventure. Singabantu abakhululekile futhi leyo ikhwalithi yethu ebaluleke kakhulu.
Sakha izesekeli ezakhelwe ukuhamba nawe emdlalweni owenzayo futhi sifuna ukubenza ababambisene nabo kukho konke okuhlangenwe nakho okwenzayo. Inhloso yethu lapho sisabalalisa umkhiqizo ngamunye ukuthi noma ngubani othanda imidlalo nenkululeko angayithenga.
Imiklamo esiyenzayo The Indian Face Banekhwalithi enhle kakhulu, ehambisana nentengo kulayini. Inhloso yethu ukuqinisekisa ukuthi izinto zethu ziya emakethe zihlonyiswe ukusebenza okuphezulu esikuphakamisile, nokuthi nazo ziyahlangabezana nezidingo nalokho okuthandwa amakhasimende ethu.
Isinyathelo esilandelayo, ngemuva kokuklama nokukhiqiza into ngayinye, ukuxhumana ukutholakala kwayo esitolo sethu esiku-inthanethi. Sikwenza ngokukhipha ku-inthanethi esikudalile ukuze yonke iMimoya yamaNdiya yazi ukuthi ingakuthola. Lapha umthengi angathola imikhiqizo yale sizini neminye, kusetshenziswe izaphulelo nezaphulelo.
Esinye isikhungo esisinikeza umthengi wethu ukuthi sinesigaba kumkhiqizo wethu lapho sinikela khona ngosuku emikhiqizweni yethu eminingi; Lokhu kusho ukuthi sikhetha eminye yemikhiqizo yethu, futhi, izinsuku ezingama-24, siyayikhangisa bese sisebenzisa okunikezwayo kubo. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi lezi zinhlobo zokunikezwayo zisebenza kuphela amahora angama-24.
Ukuze uthenge imikhiqizo yethu, sihlala sinikeza isigqebhezana sesaphulelo ikhodi yaso ivela phezulu kuwebhusayithi yethu. Lapho ukuthenga kuzokwenziwa, le khodi yesaphulelo ifakwa ngaphambi kokwenza inkokhelo bese ukunikezwa kwenziwa ngokushesha. Izaphulelo esizinikezayo kwesinye isikhathi zisetshenziswa kumkhiqizo othile, intengo yawo ibonakala yehlisiwe, futhi kwesinye isikhathi sifaka isicelo kuniyunithi yesibili ikhasimende eliyithengayo.
Imikhiqizo yalesi sitolo, njengoba sesishilo, isesigabeni esibizwa nge-flash sale, noma okunikezwa ngama-flash, futhi umthengi angathola izibuko zelanga, amakepisi, izibuko zezemidlalo, izibuko zokushushuluza namawashi.
Lapho sikhetha izinto, sicabangela ukukhetha imikhiqizo yonyaka. Sifuna ukuthi imikhiqizo ihehe ikakhulukazi kumthengi ukuze kuthi, uma siyifaka esitolo esiku-inthanethi, abasubathi bethu bazothola isipho esithandekayo nesikhangayo abangasizakala futhi basithokozele.
Elinye iphuzu lokuvumela ukwenza i-flash liphume ku-de The Indian Face, ukuthi sithanda ukuletha imikhiqizo yethu ngendlela esheshayo nephumelelayo, ukuze, ngaphezu kokusebenzisa umkhiqizo wekhwalithi enhle kakhulu futhi onikezwayo, iklayenti ngeke kudingeke lilinde ngaphezu kwamahora angama-24 ukuthola umkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, uma umthengi ethenga ngaphezu kwama-euro angama-35, kungaba nge-inthanethi noma ekhasini eliyinhloko, izindleko zokuthumela azikhokhiswa.
Ukwenza ukuthenga okugxile ekunikezelweni nasekusebenziseni intengo, elinye ithuluzi elihehayo kakhulu esilenza litholakale kumthengi futhi elizosiza ukugcina usesikhathini ngokutholakala kwama-athikili kuwebhu, imikhiqizo enezaphulelo esitolo noma izindaba nokusha amaqoqo, yi-Newsletter yamasonto onke The Indian Face, enikeza ithuba lokubhalisile ngokungena kuwebhu.
Sikhuthaza noma ngubani othanda imvelo, ezemidlalo yangaphandle nemfashini ewusizo nekhwalithi, ukuthi asizakale ngazo zonke izinketho esizinikezayo, kungaba nge-outlet yethu, amakhodi esaphulelo, noma ngezingosi zethu zokuthengisa ezizimele.
En The Indian Face Sinikeza ngemikhiqizo eyahlukahlukene, konke okuhloswe ngayo ukwenza ukuzijwayeza kwezemidlalo kusebenze kahle kakhulu futhi kuthuthukise ukuphepha kwakho ngenkathi uqeqeshwa.
Ngakolunye uhlangothi, sithola amakepisi ezemidlalo, imikhiqizo obekuyinto eyejwayelekile kumasizini amuva nje futhi eqhubeka ngokuhlanganiswa njengezesekeli zesimanje futhi engeza ukuguquguquka kulabo abayigqokayo. Onembe manje sebembathwa unyaka wonke, kungakhathalekile ukuthi kusehlobo noma kusebusika. Lokhu kungenxa yezizathu zobuhle nokwandisa ukuphepha elangeni okuthi, eSpain, kukhanye cishe zonke izinsuku zonyaka. Kodwa-ke, uma kuliqiniso ukuthi ehlobo ukusetshenziswa kwalo kuyanda kwazise imisebe yelanga isifinyelela ngamandla amakhulu futhi sivezwa kakhulu, kokubili ezinzuzweni zalo nasezithiyo zalo. Ngalesi sizathu, ezinyangeni zasehlobo sethula ukuthengisa kugxile kakhulu kulolu hlobo lwemikhiqizo, ngoba siyazi ukuthi yinto ebaluleke kakhulu kubathengi.
Ngakolunye uhlangothi, umkhiqizo wethu nawo unekhathalogi ephelele yezingilazi zelanga. Inhloso yethu kulesi sigaba somkhiqizo ukuthi ngaso sonke isikhathi sithobele amazinga asezingeni eliphakeme kakhulu nokusebenza, ngoba siyazi ukuthi ukuphepha kwabanye kusezandleni zethu futhi sifuna ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu othenga izibuko zelanga kusuka The Indian Face, uvikeleke ngaso sonke isikhathi.
Le nsiza nayo ayiphelelwa yisikhathi futhi akudingeki ukuthi kube ihlobo ukuyigqoka, kepha thina, ngaphezu kokuba nokutholakala okuqhubekayo esitolo sethu, kwethulwe, ngesikhathi sokuthengisa sasehlobo nangesikhathi sokuthengisa sasebusika, imikhankaso yokuphromotha yezibuko zethu, ukuze esisebenzisa izaphulelo ezikhethekile, ukuze abathengi bakwazi ukujabulela ilanga lasehlobo ebhishi nelanga lasebusika entabeni ngokuphepha okuphelele.
Umkhiqizo olandelayo ongatholakala ku- The Indian Face, nokuthi siyaziqhenya ngokunikela, uhla lwethu lwezibuko zelanga zemidlalo. Lesi sigaba somkhiqizo sinezici eziphelele kakhulu nekhwalithi ephikisana nokuhamba phambili emakethe. Imikhiqizo yethu iyahlolwa futhi ivunyelwe, kanye nethimba elihle kakhulu lobuchwepheshe eliphethe ukuklama nokwenza izinto, linake kakhulu yonke imininingwane, yiqembu lezemidlalo elite labasubathi, abagijimi, abagibeli ... abasisizayo ukuthuthukisa manje. phelelisa umkhiqizo ngamunye. Izibuko zelanga zezemidlalo ziyizinto ezikhangayo ngokwazo, kepha ubuhle bazo buba buphathekayo nakakhulu uma kufakwa isigqebhezana sesaphulelo kubo noma bavela phakathi kwemikhiqizo ngokunikezwa kosuku, ngoba intengo yalolu hlu ixhunyaniswe nokuphepha abakunikezayo futhi izici abanazo. Ukuthenga izingilazi zemidlalo akudingekile ukuthi uzibuze ukuthi ukuthengisa kuqala nini, ngoba ku The Indian Face Sizama ukuthi kuhlale kukhona izindatshana zalezi zici lapho uhlobo oluthile lwesigqebhezana sesaphulelo lungasetshenziswa khona. Kuyiqiniso ukuthi ngesikhathi sokuthengisa sasehlobo nasebusika sigxila kakhulu ekukhuthazeni izingilazi zezemidlalo njengoba siqonda ukuthi kungalezi zikhathi lapho ezemidlalo zanda, ngakho-ke, ukuthengwa kwemishini yezemidlalo.
Kwenzeka into efanayo nangezigqoko ze-ski. Ungomunye wemikhiqizo yethu yePrimiyamu futhi wenzelwe abasubathi futhi, ngakho-ke banekhwalithi nezinzuzo ezihlukile ezeqa izindinganiso zemakethe. Ngaphezu kwalokho, sinaka ngokukhethekile ukwakheka nobuhle bemodeli ngayinye. Yimikhiqizo eletha ukulinganisela nobuhle kumthengi, mikhulu kodwa imibala emincane futhi engathathi hlangothi ibaluleke kakhulu ukuze ihlanganiswe kalula nemishini yokushushuluza. Ngaphezu kokunikeza izibuko zokushibilika eqhweni naseqhweni esitolo sethu esiku-inthanethi nasezindaweni zethu zokuthengisa ezizimele, ngesikhathi sokuthengisa sasebusika sandisa umkhiqizo wethu futhi sibanikeze ithuba lokusebenzisa amakhodi esaphulelo.
Ekugcineni, The Indian Face futhi inikeza ububanzi bamawashi. Le mikhiqizo nayo ayinasikhathi ngokuphelele, ngakho-ke okunikezwayo akukwenzelwa ukuthengiswa kwehlobo noma kwasebusika, kepha kunalokho sisebenzisa izaphulelo ekuthengisweni kwethu kwe-flash ngezikhathi ezithile.
Njengoba kungabonakala, ku- The Indian Face Siyajabula ukuthi noma ngubani angathenga imikhiqizo yethu ngezindleko ezingabizi kakhulu, futhi senza konke okusemandleni ukwenza lokhu kwenzeke.